Photocall TV: iyi ndiyo padandemutande iyo inobvumidza iwe kuti utarise zviuru zvematanho mahara | Ndinobva mac
Photocall TV: iyi ndiyo dandemutande iyo inobvumidza iwe kuti utarise zviuru zvematanho mahara
Jordi Gimenez | 02/07/2021 13:09 | Tutorials
Parizvino pane mapeji epawebhu atinogona kuona mamwe materevhizheni mahara zvachose, asi mune iyi nyaya tinoda kugovana newe chiitiko chiri kurova mambure uyezve iri peji rewebhu iro inokutendera kuti iwe uone anopfuura 1000 makirati eTV mahara zvachose.
Tine chokwadi chekuti vanopfuura mumwe wenyu vangatoziva ino webhusaiti, inonzi Photocall TV uye inotibvumidza kuona yakanaka ine chiteshi kubva kune chero chishandiso, ingave yako Mac, yako iPhone, yako iPad kana chero chishandiso chinokwanisa kubatana kunetiweki. Kushandiswa kwaro kuri nyore chaizvo uye nhasi tichaona zvimwe zvepeji rewebhu izvo, senge migero, zvakare ine mamirioni evashandisi izvozvi vari kunakidzwa nezviri mahara zvachose.
1 Photocall inokutendera iwe kuti uone anopfuura chiuru chemugero dzeTV zvachose mahara
2 Nzira dzenyika pa Photocall TV
3 Haufanire kurodha chero chinhu kuti uone zvemukati muPhotocall
4 Maitiro ekuona chiteshi pa Photocall TV
4.1 Zvakajairika, dzimwe nguva zvinogona kutadza
5 Maitiro ekuteerera kune redhiyo kubva ku Photocall.Tv
5.1 Inoshanda pamwe neese mabhurawuza
6 Mhedziso yekupedzisira yeino inozivikanwa webhusaiti
Photocall inokutendera iwe kuti uone anopfuura chiuru chemugero dzeTV zvachose mahara
Chinhu chakakosha apa kunakidzwa nezviri mukati uye kunakidzwa nazvo kubva chero kupi, saka nekungori neinternet yakanaka chete isu tichakwanisa pinda runyorwa rurefu rweterevhizheni uye kunyange chiteshi cheredhiyo, zvese izvi sekutaura kwedu pasina mahara. Asi ngatiendei nezvikamu sezvavakataura mu "chirevo chinoshamisa muvhi" uye regai tione kuti mangani matanho atinogona kuona. Chinhu chekutanga kutaura kuti pane:
390 nzira dzenyika dzese
369 tambo chiteshi / zvimwe
Makiromita makumi maviri nematanhatu emunyika
230 redhiyo chiteshi
14 zvinongedzo kumarairidzi epurogiramu
Kubva pane ino webhusaiti iwe unogona kunakidzwa nemhando dzese dzemukati. Asi chinonyanya kukosha mune ino kesi ndechekuti kana rimwe zuva nekuda kwechimwe chikonzero kumba kana muhofisi tisingakwanise kuwana terevhizheni, tichakwanisa kuwana kubva kuMacBook, iPhone, iPad kana chero chishandiso chine webhu kuwana kugutsikana uchishandisa PhotoCall.
Nzira dzenyika pa Photocall TV
Ehe tiri kuenda kutumidza mazita ese mageru anogona kuoneka kubva pawebhusaiti ino, asi kana mamwe akanyanya kukosha kana avo vane akakwezva zvakanyanya munyika medu. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kujekeswa kuti dzimwe dzenzira idzi dzinotova nekwaniso yezvinyorwa zvavo zvakananga pamapeji avo ewebhu, asi muzviitiko zvakawanda zvinofanirwa zvakare kutaurwa kuti kuwaniswa kwezviri mukati kunoitwa nguva refu mushure mekushambadza mune ino nyaya hatizove nematambudziko sezvo pasina kushambadzira kupfuura izvo zvakajairika mabhanhire ekurodha anoonekwa kana uchibaya pane zvinongedzo kubva kumaterevhizheni.
Iyi ndiyo mimwe migero yenyika yaunogona kutarisa:
Asturias Terevhizheni (TPA)
Haufanire kurodha chero chinhu kuti uone zvemukati muPhotocall
Izvi zvakakosha sezvo, semamwe mashandisiro, mapeji ewebhu uye nezvimwe zvakadaro, Photocall TV haidi kutora chero application kuti uone zvemukati, asi isu tinoita chitsama chakanaka chemabhena ane kushambadzira achaonekwa kwatiri kuti tinyore pa «kurodha pasi kuti uone ...» Isu tinofanirwa kunyevera kuti aya mabhenji ari kushambadza uye kuti webhusaiti haireve kune chero kurodha pasi kwekushanda kwayo.
Mashandiro ayo akanaka chaizvo asi kana chiri chokwadi kuti vanhu avo vasina kujaira rudzi urwu rwepeji vanogona netsaona pane chero mabhanhire ekudhawunirodha kana pamatepi anovhura achikumbira kugamuchira rumwe rudzi rwekurodha pasi kuti vaone zvirimo . Tinodzokorora, hazvidi kuti utore chero chinhu kuti uone Photocall, saka isu tinongofanirwa kudaro pinda peji uye tinya pane chiteshi chatinoda kuona, vhara akasiyana mabhenji ekushambadzira kana ma tabo anoonekwa uye ndizvozvo.
Maitiro ekuona chiteshi pa Photocall TV
Iye zvino tava kuenda nematanho aunofanirwa kutevera kana iwe uchida kuona chiteshi chako kubva pawebhusaiti. Mupfungwa iyoyo, zvinofanirwa kutaurwa kuti hazvina kuomarara zvachose asi kana uchifanira kutevera matanho mashoma kuti ugone kunakirwa neizvi kubvira sekutaura kwatinoita pamusoro Tabhu dzinozovhura iyo nguva iwe yaunodzvanya bhatani reKutamba. Kuti tione makwara isu tinofanirwa kuita zvinotevera. Chekutanga vhura iyo Photocall.Tv webhusaiti uye wozongotevera nhanho dzatiri kuzoratidza pazasi.
Tinodzvanya panzira yatinoda kuona kamwe (inomiririrwa muchimiro cheapp) uye bhokisi re dialog richaonekwa mune dzimwe nzira dzinoonekwa:
Iye zvino tinofanira kudaro tinya pane chero sarudzo dzinoratidzwa mune yekudonha-pasi menyu, kwatiri, tiri muCatalonia, tinobaya pazviri, asi iwe unogona kuona dzimwe nzvimbo dzenharaunda pasina matambudziko. Ichokwadi kuti mamwe anogona kukundikana asi muzviitiko zvakawanda hauzove nematambudziko. Paunenge uchimanikidzwa, iyi tebhu ichaonekwa:
Hechino chakakosha kuti uone zvinhu zviviri: chekutanga ndechekuti maviri ma tabo anoonekwa mubrowser uye yechipiri ndeyekuti iyi Play bhatani rakakura, kana tangoichinya, ichava imwe yakavhurika tebhu ine kushambadzira. Saka pano tinofanirwa kungwarira tinya Ridza, mirira kuti imwe tebhu ivhure uye ivhare iyo kuti idzokere ku Play bhatani:
Sekurudziro tinogona kuti zvakazara Zvinokurudzirwa kuisa shambadziro blocker kana isu tichida kuwana iyi peji rewebhu sezvo mabhenji achigara. Kana tangovhara iyi tebhu nyowani, tinongobaya pane bhatani reKutamba zvakare uye ndizvozvo.
Chaizvoizvo kushanda kweichi peji rewebhu kuri nyore uye kuri nyore asi ramba uchifunga kuti kushambadza ndizvo chaizvo zvinoita kuti iro peji rive remahara saka zvakajairika kuti iwe unowedzera inoyevedza huwandu hwemashambadziro emabhanhire uye ekushambadzira tabo. Ndokusaka tichikurudzira kuiswa kweyekushambadzira blocker sezvatakambotaura pakutanga.
Zvakajairika, dzimwe nguva zvinogona kutadza
Uye hongu shamwari, ino webhusaiti haisi imwe yezvikanganiso zvakanyanya, asi zvinogona kuti rimwe zuva zvinokundikana kana iwe haugone kuona izvo zvemukati zvaunoda.
Maitiro ekuteerera kune redhiyo kubva ku Photocall.Tv
Sezvatakambotaura pakutanga, zvinokwanisika kuti uterere redhiyo, kunyangwe mune iyi nyaya tisingazvikurudzire sezvo chiteshi cheredhiyo chega chega chichive nechikumbiro chayo chefoni kana zvimwe zvakafanana. Asi kana iwe uri mumwe wevaya vanoda kushandisa peji rino kuteerera redhiyo, iwe unofanirwa kungobaya pamatanho aya uye unakirwe nezviri mukati:
Parizvino ruzivo: COPE, Onda Cero, RNE, Rac1 ...
Mitambo: Radio Marca, Radio Betis, Radio Sevilla, nezvimwe.
mumhanzi: Dial, Los 40, Ridza Radio, Melody FM, Europe FM, Rock FM, Ibiza, nezvimwe
Senge neterevhizheni chiteshi, kuteerera kune aya maredhiyo chiteshi iwe unofanirwa kutevedzera iwo mamwe matanho, asi mune ino kesi kumusoro kwewebhu chinja menyu uye tinya pawairesi. Kana tangova muchikamu cheredhiyo tinowana nzira dzese dzinowanikwa kana zviteshi uye tichaita nenzira imwecheteyo yekutarisa terevhizheni.
Inoshanda pamwe neese mabhurawuza
Uye isu tinoti inoshanda pamwe neese mabhurawuza nekuti isu hatina kuyedza ese asi tinoziva zvechokwadi kuti ino webhusaiti yakasungirwa vese kana angangoita ese mabhurawuza. Mupfungwa iyi, tinogona zvakare kushandisa PhotoCal TV pane chero nhare mbozha, piritsi, nezvimwe.
Kwedu, kana tichida kushandisa iyo Mac iri nyore chaizvo sezvo vazhinji vedu takashandiswa kushandisa mafomu kana mapeji anotumira kushambadza, mune ino kesi zvakafanana nezviitiko zvakapfuura.
Mhedziso yekupedzisira yeino inozivikanwa webhusaiti
Muvoni iyeye kuti kuva chinhu chemahara chinogona kukundikana uye isu hatigone kuzvikumbirawo nekuti iwe hausi kubhadhara sevhisi uye izvi zvinoreva kuti vane kodzero yose munyika kuti vatadze. Panyaya yehunhu hwevhidhiyo tinogona kutaura kuti rakanyanya kunaka uye zvese zvinoratidzwa zvinogona kuoneka pasina kucheka tichifunga kubatana kwako zviri pachena. Iyo yakakwira iyo yekubatanidza kumhanya, zvirinani iwe uchakwanisa kuona zvirimo, asi izvo zvinoitika nezvose zviri paInternet nhasi. Munyika yedu, nekuda kwefibre, tinogona kutaura kuti zvemukati zvinoonekwa pane ino webhusaiti zvinotambura zvishoma, kunyangwe chiri chokwadi kuti nguva nenguva zvinogona kukundikana.
Kuva nepeji yerudzi urwu kunogona kubatsira chaizvo kuvanhu vazhinji vasingakwanise kuwana zvakananga terevhizheni kana avo pane imwe nguva vanofanirwa kuona chirongwa chakati uye iwe usipo. Ichokwadi ndechekuti inoshamisika munzira dzese uye Mhando dzakasiyana dzema Photocall dzinopa dzinoyevedza zvechokwadi.
Semazuva ese mune aya kesi isu tinofanirwa kufunga nezvezvikwangwani zvekushambadzira uye tabo dzinovhura kana isu tinya pane Play bhatani kutambaKana isu takanyatsoteerera uye tisingakanganise hatizove nematambudziko asi hatifanirwe kumhanya kuti tione zvirimo, gara uchitarisa kwaunodzvanya nekuti unogona kurodha pasi chimwe chinhu chausiri kutsvaga.
Kana zvakadaro mashandiro acho nenharembozha yedu ingave iri iPhone, iPad kana chero chinhu cheApple nezvimwe. tinogona kutaura kuti inoshanda chaizvo, Zvichida zvishoma zvishoma nyore kushandisa nekuda kwehukuru hwechidzitiro, asi iwe haugone kuve nematambudziko nekushandisa. Muzhinji, peji rewebhu ratinokurudzira kuona terevhizheni zvachose kubva kune chero chishandiso uye munzvimbo chero, inogara iine Internet kubatana, hongu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Photocall TV: iyi ndiyo dandemutande iyo inobvumidza iwe kuti utarise zviuru zvematanho mahara
Safari Technology Preview vhezheni 127 ikozvino yavapo
Iyo 12-inch MacBook yakawedzera kune Apple's "Vintage" runyorwa